Action lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Aiza no tsy ho leo sy haka aina, izany ao amin'ny aterineto mavitrika Games Action, izay dia afaka ny hilalao manasa herim-po ny ankizilahy sy ankizivavy izay koa dia maneho mavitrika liana amin'ny platforming, ady sy ny fitifirana lalao. Virtual nitondra fitaovam-piadiana tamin'ny fahavalon'ny ny toetrany, fa ny fanampiana dia malaza hampiely ny fahavalo, nanangona fanampiny rakitry ny ela sy hamita ny ady nandresy. Tsarovy fotsiny – Ny fiainanao dia tsy misy fetra, ary miezaka ny fahombiazan'ny ny telo. Miezaha mandany ny fotoana mahomby sy ho velona izy.
Tiny mpihady diamondra teny
The farany sisa tsy maty
Stickman maverick lehilahy ratsy fanahy mpamono olona
Ball Hero Adventure: baoty baolina mena
Ratsy mponina 4
Baby Hazel Alien Namana
St ForceMan Team Force
Laboratory ny fahafatesana
Afaho amin'ny fonosana
Pixel battle. IO
Ny saka ao amin'ny satroka dia mahafantatra zavatra betsaka momba izany! Camp fotoana
Mpihaza tanàna Sniper
Tsy maintsy maty ny trano i Slendrina
Ny Pyramide Very
Tafika fiadiana miaramila
Lalao Action tamin'ny Category:
Farany Action lalao
Agent Sniper miafina
Ilay Mpanjaka adala
Fire Range Simulator
Lalao Online Rehetra Action lalao
fanokafana ny fizarana ny lalao hetsika, vonona ny Mandositra ny fahavalo ka hanafika fanafihana ny tenany, satria, tahaka ny hoe mandeha, dia tsy misy tsara kokoa noho ny fanafihana fiarovana. Noho izany, fitaovam-piadiana tao amin'ny vonona!
ianareo rehetra samy efa tsara azo, tsy misy glamorous kilalao hatrany am-piandohana ny tantaram-pitiavana sy ny tonon-hitranga amin'ny farany. Misy mandeha tena, mafy ny olona izay tsy matahotra hamiravira niala ny lohalika, maloto sy fiara mpisintaka ao amin'ny rantsan-tànany. Tsy matahotra ny fahitana ny ra sy ny rakotra fanaovam-panavotana amin'ny alina, satria – miaramila. Ary tahaka ny miaramila tsaran'i foana ny manonofy ho lasa ankapobeny, dia tsy maintsy manao be dia be ny lalitra, hisambotra fahavalo tanjona, mitifitra ny fahavalo, nahazo ny loka ho an'ny fandidiana mahomby sy hanorina asa miaramila.
Ny tena fitsipiky ny hetsika Lalao
izany no tsara indrindra hita taratra eo amin'ny MMORPG ny loka Lalao izay apetraka eo amin'ny realism ny asa, sary sy ny zava-nitranga. Eto an-tany manana ny mpitily, Skoty, saboteurs. Avy eo izy ireo handeha hanafika sy hiaro azy manokana sisintany manohitra ny fahavalo. Aza gaga raha tsy maintsy namantatra ny dikan'ireo soratra kaody ho safes izay mitahiry ny antontan-taratasy, na mamonjy fanafody avy amin'ny aretina. Taorian'ny asa manaraka dia ho misiôna vaovao, toy ny mba hampihenana tetezana, lalamby, mitifitra nidina ny fiaramanidina, dia aza dinganina ny andry ny fiara mifono vy sy ny sisa.
Flash lalao hetsika amin'io lafiny io, tsotra kokoa, tsotra. Izy ireo zava-dehibe ny Manaova zavatra avy hatrany sy nitifitra marina, tsy misy fieritreretana zavatra hafa ny fananganana ny Tactical asa lehibe. Mazava ho azy, misy ny olana voafaritra tsara, fa toy ny fitsipika dia iray ihany na ao amin'ny vondrona roa indrindra ho an'ny fampitana. Ny hatsaran-tarehy ity dia mahafinaritra fa tsy ilaina ny mamaky ny lava ifampiresahana ny litera, hijery karatra mpifanandrina, mba hampivelatra ny drafitry ny asa, ary tena haingana tafiditra ao amin'ny hetsika sy namely ny lasibatra tifitra marina, nahazo lalao teboka.
Azo ady manolotra ny mpilalao tena sy noforonin'ny saina zava-nitranga izay efa nitranga tao anatin'ny ady, na any amin'ny lavitra Moyen Âge. Fa misy lalana mahafinaritra, izay nanjary nalaza indrindra tato ho ato. Dia voafafy ho any amin'ny tontolo ny saritaka feno fanoharana, ody sy ny maha-Mahefa ny Fantasy lasa ho any amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe mpanatrika ny Gamers, izay mahita ny tenany amin'ny toetry ny anjara toerana sy ny miady ho marina mahatonga hafahafa fitaovam-piadiana.
Common endri-tsoratra ny lalao hetsika
Na dia izany aza, raha ny elves, dwarves, orcs sy ny solontena avy amin'izao tontolo izao ny zava-miafina sy ny fiaraha-miory fanajana didy, dia zombies, werewolves, vahiny, ary ny biby hafa no somary miavaka saranga, ary dia manaiky ny lozabe hamongorana. Hamono azy ireo mafy, ary ny solontenan'ny ny ratsy fanahy izao tontolo izao matahotra ny fitaovam-piadiana manokana.
Ny tena fitaovam-piadiana miaramila ny lalao hetsika
Eny, lalao hetsika dia tsy kahihitra eo amin'ny fitaovam-piadiana sy manome anao ny isan-karazany ny fitaovam-piadiana ho an'ny isan-tsirony: sabatra, nunchaku, grenady, BASY, bazookas, lasers, tifitra, ary ny olon-kafa. Na izany aza, mba hanararaotra ny tena mandroso, dia tsy maintsy hanorim-ponenana ny voalohany faran'izay tsotra, ary mahazo ny tsara sy ny teboka mba handroso.
Na aiza na aiza misy mavitrika fitaovam-piadiana sy ny tifitra, dia tsy maintsy hiady ho ny ainy, dia tsy mahagaga raha fepetra lalao – no « hetsika lalao ». Afaka mifehy tsy ny miaramila, fa ny miaramila fitaovana – fiara mifono vy, fiaramanidina, submarines, mpitsangantsangana. Account no naka ny isan'ny tsara-mikendry tifitra, fahaverezana sy ny mpanohitra.
Na dia izany aza, na dia teo aza ny zava-misy fa ny saha rakotra ao amin'ny ra, any amin'ny virtoaly ady sarotra ho raisina ho zava-dehibe, satria ny filazana fa mahery setra indrindra lalao ka ento amin'ny mpilalao herisetra tsy mety. Izany dia tahaka raha hoy ianareo: toy ny hoe mitsambikina tady mahatonga ny concussion na tongotra ho any amin'ny fitifirana isan-karazany sy ny mitifitra amin'ny biby sarivongana dia toy izany eo amin'ny fiainana. Noho izany, milalao ny voly ary tsy mihaino ny fomba fijery ny tsy mahay.